नेत्रहिन संघ झापाका ५५ परिवारलाई खाद्यन्न सहयोग - Limbuwan khabar
नेत्रहिन संघ झापाका ५५ परिवारलाई खाद्यन्न सहयोग
शुक्रबार, ०५ कार्तिक, २०७८ रातीको ०९:२२ बजे, लिम्बुवान न्युज
लिम्बुवानखबर । बिर्तामोडका समाजसेवी देवीप्रसाद भट्टराईको वार्षिक पुण्य तिथिमा उनका परिवारले झापा नेत्रहिन संघका ५५ परिवारलाई खाद्यन्न सहयोग गरेका छन् ।
गत वर्ष कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका बिर्तामोड– ५ निवासी देवीप्रसादको वार्षिक पुण्य तिथिमा उनका छोरा निर्मल भट्टराईले खाद्यन्य सहयोग गरेका हुन् ।
अलैची व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले २५ केजी चामल, एककेजी दाल, एक केजी नुन, एक लिटर खानेतेल तथा उनीहरुललाई यातायात खर्च समेत प्रदान गरेका थिए ।
नेत्रहिन संघ झापाकी अध्यक्ष यशोदा बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्व. देवीप्रसादकी श्रीमती माया भट्टराईको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो ।
कार्यक्रममा निर्मल भट्टराईले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने नेत्रहिन संघका झापा उपाध्यक्ष होमनाथ राजवंशीले स्वागत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ झापा अध्यक्ष एकराज गिरी, नेत्रहिनका सल्लाहकार संयोजक द्रोणचार्य निरौला, स्व. देवीप्रसादका दाजु सत्यनाथ भट्टराईलगायतले भट्टराई परिवारले गरेको कार्यको प्रशंसा गरेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन संघका सचिव भोजराज तामाङले गरेका थिए । (पुर्वाञ्चल दैनिकबाट)